Counter Counter Online - Manisa Karakter | Famoronana an-tserasera
Counter Counter Online - Manisa Karakter
Azo antoka fa efa nilainao izany manisa ny isan'ny litera ao anaty lahatsoratra iray. Ankehitriny izany rehetra izany dia tsotra be noho io mpanohitra toetra an-tserasera, ary hahafahanao manisa ny isan'ny tarehin-tsoratra amin'ny lahatsoratra rehetra haingana sy mora foana.
Soraty amin'ity boaty manaraka ity ny lahatsoratra, tsindrio ny bokotra "Manisa litera" ary dia izay. Mora kokoa, tsy azo atao.
Ho fanampin'izay, manana ihany koa izahay a counter teny amin'ny Internet Azo antoka fa tena hahasoa anao izany.
1 Ahoana ny fomba fiasan'ny mpanohitra ny endri-tsoratra amin'ny Internet?
2 Inona no atao hoe mpanohitra?
Ahoana ny fomba fiasan'ny mpanohitra ny endri-tsoratra amin'ny Internet?
Fitaovana an-tserasera, antsika mpanohitra toetra Tsy mila fametrahana mialoha ny solosainao na ny findainao izany, amin'izay azonao ampiasaina avy hatrany rehefa miditra amin'ity pejy ity ianao.
Para fantaro ny isan'ny tarehin-tsoratra misy anaoMila miditra fotsiny ao anaty boaty etsy ambony ianao, ary tsindrio ny bokotra tsirairay etsy ambany raha te hampita hafatra miaraka amin'ireo tarehimarika voisa.
Afaka segondra dia hanana valiny marina amin'ireo tarehin-tsoratra ireo ianao. Zava-dehibe ny fahafantaranao izany isaina koa ireo habaka, fa raha tianao ny handefasanay fampiasa iray izay tsy manisy fiheverana azy ireo, dia tianay izany raha hifandray aminay ianao mba hahafahanao mampihatra an'io fomba vaovao io amin'ny fitaovana.
Inona no atao hoe mpanohitra?
Amin'ny asa sasany mitaky litera farafahakeliny hahafahanao manombatombana ny lahasa, noho izany dia tsara ny hanananao fitaovana hahafahanao manatanteraka an'io dingana io ho azy sy mora.
Misaotra mpanohitra toetra avy amin'ny Creativos Online, afaka manana ireo tarehimarika ireo amin'ny fomba tena ahazoana aina ianao, satria amin'ny alàlan'ny fampidirana fotsiny ny lahatsoratra dia ho fantatrao ny tarehin-tsoratra totalinao.
Ahoana anefa raha tsy mandeha ilay fitaovana? Na dia tokony handeha tanteraka aza izy io, dia azonao atao ihany koa ny mampiasa fitaovana toa ny Word hanatanterahana ny fanisana ny toetra: to manisa litera ao amin'ny Word, mila misafidy ny ampahany amin'ilay lahatsoratra tianao isaina fotsiny ianao, ary kitiho eo Famerenana> Word Count> Toetra.
Araka ny hitanao dia dingana sarotra kokoa io satria tsy maintsy manao tsindry maromaro ianao, noho izany dia mamporisika anao izahay handeha hatrany amin'ity tranokala ity, satria amin'ny tsindry tsotra dia hanana izay tadiavinao ianao.
Manantena izahay fa ity fitaovana an-tserasera amin'ny fanisana tarehin-tsoratra ity dia hahasoa anao.